ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ ဘုရားဆှမျးတျောကပျလြှငျ ဘယျလိုကပျရသလဲ ? – Shwe Naung
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ ဘုရားဆှမျးတျောကပျလြှငျ ဘယျလိုကပျရသလဲ ?
ဗုဒ်ဓဘာ သာ အမြားရဲ့ အလှဲေ တှထဲက နောကျထပျ အလှဲတဈခုက ဘုရားဆှမျးတျော ကပျတာလေးပါ။ ဆှမျးတျောကပျလှူတာကို ပွောတာပါ။ နတျတငျ သလိုမြိုး ဘုရားဆှမျးတျောတငျတာမြိုး မဟုတျပါဘူး။
ဆှမျးတျောက ပျတာ ဆိုတဲ့ အတှကျ သကျရှိထငျရှား ဘုရားရှငျကို ရညျရှယျအာရုံပွုပွီး ကပျဖို့လိုပါတယျ။ ဘုရားက ဘာမှ မပွောဘူးဆိုပွီး ဖွဈသလိုလေး တငျသှားတာ မြိုးတော့ မဖွဈ သငျ့ပါဘူး။ ဗုဒ်ဓဘာ သာဝငျ အခြို့ရဲ့ အိမျမှာဘုရား ဆှမျးတျော ကပျတာလေးတှေ တှဖေူ့းပါတယျ။ ထမငျးပနျးကနျလေးပျေါမှာ သကွားလေးဖွူ၊ ထနျးလြှကျလေးနဲ့ တငျထားတာကိုပါ။
အိမျမှာ စားစရာ မရှိလို့၊ သူတို့ ကိုယျတိုငျ ဒီသကွား၊ ထနျးလြှကျတှနေဲ့ စားနရေလို့ဆိုရ ငျတော့ အထူးပွောစရာ မရှိပါဘူး။ ကိုယျစားနိုငျတာ၊ ကိုယျရှိတာလေးနဲ့ ကိုယျနဲ့ထပျ တူထားပွီး ဘုရားရှငျကိုလညျး မရှိရှိတာ ကပျတဲ့ သဘောပါ။ ခုဟာက အဲလိုမဟုတျ ပါဘူး။ မကပျနိုငျလို့ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျစားတဲ့အခါ ဟငျးသုံးလေးမြိုးနဲ့ စားနပွေီး ဘုရားဆှမျးတျော ကပျတဲ့အခါ မှာသာ အဲလိုတငျတာပါ။ တမငျတ ကာ ရညျရှယျပွီး တငျတာတော့ မဟုတျလောကျပါဘူး။မသိလို့ ဖွဈမှာပါ။
ဒီလိုပဲ တငျရတ ယျထငျလို့ ထမငျးပနျးကနျလေးအပျေါမှာ သကွားထနျးလြှကျလေး ပုံပွီးတငျတာ ဖွဈမှာပါ။ ရှေးအစဉျလာ ကတညျးက ဒီလိုတငျရတယျလို့ သိနခေဲ့လို့ တငျတာလညျး ဖွဈကော ငျးဖွဈမှာပါ။
အဲဒီလို ပုံပွီးတငျတာဆို ရငျတော့ ဘုရားဆှမျးေ တျာကပျတယျလို့ ပွောလို့မရဘဲ နတျတငျသ လို တငျတယျလို့ပဲ ပွောရပါလိမျ့မယျ။ ဗုဒ်ဓဘာသာ အခြို့ရဲ့ ဘုရားစငျမှာ ဒီလိုနတျတငျသလို ဘုရားဆှမျးတျော တငျတာတှေ ခုခြိနျထိ ရှိနပေါသေးတယျ။ တကယျတော့ ဒီလိုမဖွဈသငျ့ပါဘူး။ ဆှမျးတျောမတငျဘဲ ဆှမျးတျောကပျသငျ့ပါတယျ။ ကပျတယျဆိုကတညျးက သကျတျောထငျရှား ဘုရားကို အာရွုံ ပုပွီး ဘုရားရှငျကို အိမျမှာပငျ့ပွီး ကပျသလိုမြိုး သခြောကနြစှာ ကပျသငျ့ပါတယျ။ နညျးတာမြားတာက အဓိကမကပြါဘူး။ဆှမျးတျောကို ဆှမျး၊ ဆှမျးဟငျး စသညျ သီးသနျ့စီပွငျပွီး ကိုယျစားသလိုမြိုး ဦးဦးဖြားဖြား ရိုရိုသသေေ ကပျလှူသငျ့ပါတယျ။ အမြားကွီး ဝိုငျးလိုကျပွငျပွီး ကပျလှူ ဖို့မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျစားတဲ့အ ထဲက မစားခငျ အဦးအဖြား လှူတဲ့သဘောနဲ့ စတေနာရှထေ့ားပွီး ကပျလှူစခေငျြတာပါ။ကပျပွီးရငျလညျး မမေ့ပြေ့ောကျပြောကျ မထားသငျ့ပါဘူး။
နောကျနေ့ တဈခါကပျခါနီးမှ စှနျ့ပွီးကပျတာမြိုး မဖွဈသငျ့ပါဘူး။ သူ့အခြိနျလေးနဲ့သူ ကပျပွီး စှနျ့သငျ့ပါတယျ။ အရုဏျကပျပွီး တဈခါစှနျ့ နဆှေမျးမှာလညျး မှနျးမတညျ့မီကပျပွီး မှနျးတညျ့၁၂နာရီ မကြျောမီ စှနျ့သငျ့ပါတယျ။ ဆှမျးမှမဟုတျပါဘူး။တဈခွား ပနျး၊ သဈသီး၊ သောကျတျောရေ စတာတှကေိုလညျး သသေခေခြာ ကကြနြန ပွငျဆငျကပျသငျ့ပါတယျ။
သောကျတျောရကေတော့ အခြိနျပွညျ့ ကပျထားလို့ ရပါတယျ။
ကပျတဲ့ သောကျတျောရခှေကျတော့ ကိုယျ့အိမျမှာ ပုံမှနျသောကျနတေဲ့ သောကျရခှေကျ အနအေထားတော့ ရှိသငျ့ပါတယျ။ တဈခြို့ ဘုရားသောကျတျောရကေို အရကျခှကျအရှယျ အသေးလေးတှနေဲ့ တဈနကေုနျ တဈခါပဲ ကပျတာတှေ ရှိပါသေးတယျ။ အလကား ရတဲ့ရကေိုတောငျ နဲနဲသေးသေးလေးပဲ ကပျတော့ ပွောစရာဖွဈတာပေါ့။
ကိုယျကိုယျတိုငျလညျး အဲဒီလောကျ သေးသေးလေးကို တဈနကေုနျသောကျပွီး နနေိုငျမနနေိုငျ ဆငျခွငျသငျ့ပါတယျ။ ပနျးကပျတာလညျး ရှိသေးတယျ။
ကွာကွာခံအောငျ၊ နောကျမလဲရအောငျ ဆိုပွီး ကပျလှူကွတယျလေ။ ဇျောစိမျးဇျောကွားတဲ့။ ကပျပွီးပနျးအိုးထဲမှာ အမွဈပါ ပေါကျလာတော့ ပိုခံတာပေါ့တဲ့။ အဲဒါဆိုလဲ ကပျမနနေဲ့တော့ပေါ့။ ပနျးလညျးလှပွီး အနံ့အသကျရှိတဲ့ ပနျးဆို ဘုရားရှငျကို ပိုပွီးပူဇျောလို့ ကောငျးတာပေါ့။ပွီးတော့ သဈသီးကပျတာတှေ ရှိပါသေးတယျ။ ဈေးသှား ငှကျပြောသီး၊ သရကျသီး အစိမျးအလုံး လှလှလေးတှေ ဝယျလာပွီ ဘုရားစငျပျေါတငျကပျထား၊ မှညျ့တဲ့အခါကတြော့ စှနျ့ပွီး ကိုယျစားပဈလိုကျတာတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီတော့ ဘုရားစငျက သဈသီးအုပျတဲ့စငျလို ဖွဈနပွေနျပါတယျ။အဲဒီလို မဖွဈသငျ့ပါဘူး။ သဈသီးအစိမျးအလှတှေ ဝယျလာလို့ ဘုရားစငျမှာ ကပျလှူထားဖွဈရငျလညျး မှညျ့တဲ့အခါမှာ သခြောကကြနြန ခှဲပွီးဇှနျးလေး၊ ခရငျးလေးတှထေညျ့ကာ အခြိနျကာလကွညျ့ပွီး ကပျလှူသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှ သဈသီးဆမျးကပျရာ ရောကျမှာပေ့ါ။ ခုတော့ အစိမျးဝယျတငျထားပွီး ကိုယျတျောအဆငျပွသေလို ဘုဉျးပေးဆိုတာမြိုး ဖွဈနပေါတယျ။ မထူးပါဘူး။
ဓားနဲ့ဇှနျးခရငျးပါတငျပွီး မှညျ့ရငျအရှငျဘုရား ကိုယျတိုငျပဲ ခှဲစားပါဘုရားလို့ တဈခါတညျး ကပျထားလိုကျပေါ့။ ပိုသကျသာတာပေါ့။
ထားပါလေ။ ပွောခငျြတာက ဘာပဲကပျကပျ သကျတျောထငျရှား ဘုရားကို ရညျမှနျးပွီး ကိုယျတတျနိုငျသမြှကို နညျးသညျမြားသညျမဟုတျဘဲ သခြောကကြနြန ကိုယျနဲ့ထပျတူ စဉျးစားကာ ဦးဦးဖြားဖြား ကပျလှူကွဖို့ ပွောတာပါ။ဘုရားရှငျရဲ့ အလုပျအကြှး အရှငျအာနန်ဒာ မထရျေလို့ပေါ့။ အရှငျအာနန်ဒာမထရျေဟာ မွတျစှာဘုရားရှငျ ပရိနိဗ်ဗာနျစံတျောမူပွီး နောကျပိုငျးမှာလညျး ဘုရားရှငျ သကျတျောထငျရှား ရှိစဉျတုနျးကလိုပဲ မပကျြမကှကျ ပွငျဆငျကာ “အရှငျဘုရား ဒီအခြိုနျက မကျြနှာသဈရေ သုံဆောငျရမယျ့အခြိနျ၊ ဒီအခြိနျက အရုဏျဆှမျးဘုဉျးရမယျ့ အခြိနျ၊ ဒီအခြိနျက နဆှေ့မျးဘုဉျးပေးရမယျ့ အခြိနျပါဘုရား“ စသညျဖွငျ့ သကျတျောထငျရှား ဘုရားရှငျကို လုပျကြှေးနတေဲ့ ပုံစံအတိုငျး ကပျလှူလုပျကြှေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
မနာပဒါယီ အရှငျဝိစိတ်တ(ဒိုကျဦး) မတ်ေတာဖွငျ့မြှဝပေူဇျောပါသညျ ။
ဗုဒ္ဓဘာ သာ အများရဲ့ အလွဲေ တွထဲက နောက်ထပ် အလွဲတစ်ခုက ဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တာလေးပါ။ ဆွမ်းတော်ကပ်လှူတာကို ပြောတာပါ။ နတ်တင် သလိုမျိုး ဘုရားဆွမ်းတော်တင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
ဆွမ်းတော်က ပ်တာ ဆိုတဲ့ အတွက် သက်ရှိထင်ရှား ဘုရားရှင်ကို ရည်ရွယ်အာရုံပြုပြီး ကပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားက ဘာမှ မပြောဘူးဆိုပြီး ဖြစ်သလိုလေး တင်သွားတာ မျိုးတော့ မဖြစ် သင့်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင် အချို့ရဲ့ အိမ်မှာဘုရား ဆွမ်းတော် ကပ်တာလေးတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ထမင်းပန်းကန်လေးပေါ်မှာ သကြားလေးဖြူ၊ ထန်းလျှက်လေးနဲ့ တင်ထားတာကိုပါ။
အိမ်မှာ စားစရာ မရှိလို့၊ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ဒီသကြား၊ ထန်းလျှက်တွေနဲ့ စားနေရလို့ဆိုရ င်တော့ အထူးပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်စားနိုင်တာ၊ ကိုယ်ရှိတာလေးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ထပ် တူထားပြီး ဘုရားရှင်ကိုလည်း မရှိရှိတာ ကပ်တဲ့ သဘောပါ။ ခုဟာက အဲလိုမဟုတ် ပါဘူး။ မကပ်နိုင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်စားတဲ့အခါ ဟင်းသုံးလေးမျိုးနဲ့ စားနေပြီး ဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တဲ့အခါ မှာသာ အဲလိုတင်တာပါ။ တမင်တ ကာ ရည်ရွယ်ပြီး တင်တာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။မသိလို့ ဖြစ်မှာပါ။
ဒီလိုပဲ တင်ရတ ယ်ထင်လို့ ထမင်းပန်းကန်လေးအပေါ်မှာ သကြားထန်းလျှက်လေး ပုံပြီးတင်တာ ဖြစ်မှာပါ။ ရှေးအစဉ်လာ ကတည်းက ဒီလိုတင်ရတယ်လို့ သိနေခဲ့လို့ တင်တာလည်း ဖြစ်ကော င်းဖြစ်မှာပါ။
အဲဒီလို ပုံပြီးတင်တာဆို ရင်တော့ ဘုရားဆွမ်းေ တ်ာကပ်တယ်လို့ ပြောလို့မရဘဲ နတ်တင်သ လို တင်တယ်လို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အချို့ရဲ့ ဘုရားစင်မှာ ဒီလိုနတ်တင်သလို ဘုရားဆွမ်းတော် တင်တာတွေ ခုချိန်ထိ ရှိနေပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဆွမ်းတော်မတင်ဘဲ ဆွမ်းတော်ကပ်သင့်ပါတယ်။ ကပ်တယ်ဆိုကတည်းက သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားကို အာရြုံ ပုပြီး ဘုရားရှင်ကို အိမ်မှာပင့်ပြီး ကပ်သလိုမျိုး သေချာကျနစွာ ကပ်သင့်ပါတယ်။ နည်းတာများတာက အဓိကမကျပါဘူး။ဆွမ်းတော်ကို ဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်း စသည် သီးသန့်စီပြင်ပြီး ကိုယ်စားသလိုမျိုး ဦးဦးဖျားဖျား ရိုရိုသေသေ ကပ်လှူသင့်ပါတယ်။ အများကြီး ၀ိုင်းလိုက်ပြင်ပြီး ကပ်လှူ ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်စားတဲ့အ ထဲက မစားခင် အဦးအဖျား လှူတဲ့သဘောနဲ့ စေတနာရှေ့ထားပြီး ကပ်လှူစေချင်တာပါ။ကပ်ပြီးရင်လည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် မထားသင့်ပါဘူး။
နောက်နေ့ တစ်ခါကပ်ခါနီးမှ စွန့်ပြီးကပ်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သူ့အချိန်လေးနဲ့သူ ကပ်ပြီး စွန့်သင့်ပါတယ်။ အရုဏ်ကပ်ပြီး တစ်ခါစွန့် နေဆွမ်းမှာလည်း မွန်းမတည့်မီကပ်ပြီး မွန်းတည့်၁၂နာရီ မကျော်မီ စွန့်သင့်ပါတယ်။ ဆွမ်းမှမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခြား ပန်း၊ သစ်သီး၊ သောက်တော်ရေ စတာတွေကိုလည်း သေသေချချာ ကျကျနန ပြင်ဆင်ကပ်သင့်ပါတယ်။
သောက်တော်ရေကတော့ အချိန်ပြည့် ကပ်ထားလို့ ရပါတယ်။
ကပ်တဲ့ သောက်တော်ရေခွက်တော့ ကိုယ့်အိမ်မှာ ပုံမှန်သောက်နေတဲ့ သောက်ရေခွက် အနေအထားတော့ ရှိသင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ဘုရားသောက်တော်ရေကို အရက်ခွက်အရွယ် အသေးလေးတွေနဲ့ တစ်နေကုန် တစ်ခါပဲ ကပ်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အလကား ရတဲ့ရေကိုတောင် နဲနဲသေးသေးလေးပဲ ကပ်တော့ ပြောစရာဖြစ်တာပေါ့။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီလောက် သေးသေးလေးကို တစ်နေကုန်သောက်ပြီး နေနိုင်မနေနိုင် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ ပန်းကပ်တာလည်း ရှိသေးတယ်။
ကြာကြာခံအောင်၊ နောက်မလဲရအောင် ဆိုပြီး ကပ်လှူကြတယ်လေ။ ဇော်စိမ်းဇော်ကြားတဲ့။ ကပ်ပြီးပန်းအိုးထဲမှာ အမြစ်ပါ ပေါက်လာတော့ ပိုခံတာပေါ့တဲ့။ အဲဒါဆိုလဲ ကပ်မနေနဲ့တော့ပေါ့။ ပန်းလည်းလှပြီး အနံ့အသက်ရှိတဲ့ ပန်းဆို ဘုရားရှင်ကို ပိုပြီးပူဇော်လို့ ကောင်းတာပေါ့။ပြီးတော့ သစ်သီးကပ်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဈေးသွား ငှက်ပျောသီး၊ သရက်သီး အစိမ်းအလုံး လှလှလေးတွေ ၀ယ်လာပြီ ဘုရားစင်ပေါ်တင်ကပ်ထား၊ မှည့်တဲ့အခါကျတော့ စွန့်ပြီး ကိုယ်စားပစ်လိုက်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဘုရားစင်က သစ်သီးအုပ်တဲ့စင်လို ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အဲဒီလို မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သစ်သီးအစိမ်းအလှတွေ ၀ယ်လာလို့ ဘုရားစင်မှာ ကပ်လှူထားဖြစ်ရင်လည်း မှည့်တဲ့အခါမှာ သေချာကျကျနန ခွဲပြီးဇွန်းလေး၊ ခရင်းလေးတွေထည့်ကာ အချိန်ကာလကြည့်ပြီး ကပ်လှူသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ သစ်သီးဆမ်းကပ်ရာ ရောက်မှာပေ့ါ။ ခုတော့ အစိမ်းဝယ်တင်ထားပြီး ကိုယ်တော်အဆင်ပြေသလို ဘုဉ်းပေးဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ မထူးပါဘူး။
ဓားနဲ့ဇွန်းခရင်းပါတင်ပြီး မှည့်ရင်အရှင်ဘုရား ကိုယ်တိုင်ပဲ ခွဲစားပါဘုရားလို့ တစ်ခါတည်း ကပ်ထားလိုက်ပေါ့။ ပိုသက်သာတာပေါ့။
ထားပါလေ။ ပြောချင်တာက ဘာပဲကပ်ကပ် သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားကို ရည်မှန်းပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှကို နည်းသည်များသည်မဟုတ်ဘဲ သေချာကျကျနန ကိုယ်နဲ့ထပ်တူ စဉ်းစားကာ ဦးဦးဖျားဖျား ကပ်လှူကြဖို့ ပြောတာပါ။ဘုရားရှင်ရဲ့ အလုပ်အကျွး အရှင်အာနန္ဒာ မထေရ်လို့ပေါ့။ အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်ဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်တုန်းကလိုပဲ မပျက်မကွက် ပြင်ဆင်ကာ “အရှင်ဘုရား ဒီအချိုန်က မျက်နှာသစ်ရေ သုံဆောင်ရမယ့်အချိန်၊ ဒီအချိန်က အရုဏ်ဆွမ်းဘုဉ်းရမယ့် အချိန်၊ ဒီအချိန်က နေ့ဆွမ်းဘုဉ်းပေးရမယ့် အချိန်ပါဘုရား“ စသည်ဖြင့် သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားရှင်ကို လုပ်ကျွေးနေတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ကပ်လှူလုပ်ကျွေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်လောက် မလုပ်နိုင်ကြပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာများဟာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာလေးနဲ့ ကိုယ်စားတဲ့အရာလေးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကျကျနနပြင်ဆင်ကာ ရိုရိုသေသေ ကပ်လှူကြစေချင်တာပါ။
ဒါကြောင့်မို့ ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်တာကို နတ်တင်သလိုမျိုး ဖြစ်သလို မတင်ကြဘဲ နည်းများမဆို စေတနာ သဒ္ဓါတရားအပြည့်နဲ့ သေချာကျကျနန ပြင်ဆင်ကပ်လှူကြဖို့ အလွဲလေးတွေကို မလွဲအောင် သတိပေးတင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ(ဒိုက်ဦး) မေတ္တာဖြင့်မျှဝေပူဇော်ပါသည် ။
သငျ့ မှေးလ အလိုကျ အရမျး မှနျေ သာ စိတျနေ သဘော ထားမြား…ကွညျ့လိုကျရအောငျ